इंग्ल्यान्ड र इटाली वेम्बलीमा भिड्दै : १६ औं युरोकपको उपाधी कसको पोल्टामा ? - Kantipath.com
१६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनल खेल आज राति हुँदैछ । वेम्बली स्टेडियमा हुने फाइनलमा इंग्ल्यान्ड र इटाली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । फाइनल खेल राति १२:४५ बजे सुरु हुनेछ । इंग्ल्यान्ड पहिलो पटक युरोकपको फाइनल खेल्न लागेको हो । एक पटकको च्याम्पियन इटाली भने चौंथो पटक फाइनल खेल्न लागेको हो ।
इंग्ल्यान्ड र इटाली दुबै टोली यस पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेका छन् । इटाली तीन पटकको च्याम्पियन स्पेनलाई हराउँदै उपाधि नजिक पुगेको हो । पहिलो सेमिफाइनलमा इटालीले स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४-२ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
इंग्ल्यान्डले डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इटालीसँगको भेट पक्का गरेको हो । रोमान्चक खेलमा इंग्ल्यान्डले डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । इंग्ल्यान्ड र इटालीबीच हालसम्म २७ खेलमा प्रतिस्पर्धा भएको छ । जसमा इटाली हाबी हुँदै आईरहेको छ । इंग्ल्यान्डविरुद्ध इटालीले ११ खेल जितेको छ । इंग्ल्यान्डले भने ८ खेलमा जित निकालेको छ । दुई टिमबीचको ८ खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
Previous Previous post: बागलुङका ६६ घर पहिरोको उच्च जोखिममा
Next Next post: प्रहरी परिसरद्वारा काठमाडौंबाट पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ
टोटनह्याम पराजित, च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरियो
मेस्सी र रोनाल्डोमा को महान भन्ने विवाद सकिएकै हो त ?
लिभरपुलका स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाहलाई कोरोना संक्रमण
फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा भोजपुरको खावा र खोटाङको रतन्छा